चंखे शंखेले राष्ट्रको गम्भीर विषयलाई उठान गरेको छ’ : निर्देशक सुदर्शन थापासंगको कुराकानी | News Filmy
लगानी उठाउँछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं
शुक्रबार अर्थात् भोलि असोज ८ गतेबाट रिलिज हुने फिल्म ‘चंखे शंखे पंखे’ ले अहिले आम फिल्मकर्मी र दर्शकको ध्यान तानिरहेको छ ।
महँगो बजेटमा फिल्म निर्माण गरिएको भनि प्रचारप्रसार गरिएको फिल्मको प्रोमो र गीतले दर्शकलाई निकै उत्सुक बनाइरहेको छ । नयाँ निर्माता सन्तोष सेनले निर्माण गरेको यो फिल्मलाई सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेका छन् ।
थापाले निर्देशनसँगै फिल्ममा प्रमुख भूमिकामा अभिनय पनि गरेका छन् । ‘मेरो एउटा साथी छ’ बाट कुशल निर्देशकका रूपमा फिल्म क्षेत्रमा उदाएका उनै सुदर्शनसँगै फिल्म ‘चंखे शंखे पंखे’का बारे गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
चंखे शंखे पंखे कस्तो फिल्म हो ?
यो मनोरञ्जनसँगै देशभक्तिको कथा बोकेको फिल्म हो । यो फिल्मले आम नेपालीको भावना, चाहना, सपना बोकेको छ । जोकोहीको पनि चाहना मेरो देश यस्तो किसिमको भइदियोस् भन्ने हुन्छ, त्यस्तै विषयलाई हामीले फिल्ममा प्रस्तुत गरेका छौं । देशमा शासन प्रणाली राम्रो नहुँदा त्यसको युवामा परेको असर, विदेशिनुपर्ने बाध्यता, योग्यता भएर पनि अवसर पाउन नसकेको विषयलाई हामीले फिल्ममा प्रस्तुत गरेका छौं । योसँगै फिल्मले राष्ट्रियताको कुरालाई पनि महत्वका साथ उठाएको छ ।
फिल्मले कस्तो राष्ट्रियताको कुरा उठाएको छ ?
हामीले हरेक नेपालीमा भएको भावनालाई प्रस्तुत गरेका छौं । राष्ट्रियताको कुरा यस अर्थमा हो कि उनीहरूको इच्छा, चाहना र भावना सुनिदिने मान्छे कोही छैन । सक्षम र सबल नेतृत्वले मात्र देशको शासन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेका छन् ।
फिल्मको प्रोमोलाई बलिउडका केही फिल्मसँग तुलना गरिएको छ नि ?
हामीले जुनसुकै फिल्म बनाउँदा पनि त्यसलाई बलिउड र हलिउडका फिल्मसँग दाँज्ने गरेका छौं । हाम्रो फिल्मको ट्रेलर हेरे कतिपयले बलिउड फिल्म रंग देश वसन्तीसँग पनि तुलना गरे । यो र त्यो फिल्म दुवै प्याट्रोटिक फिल्म हो, तर त्यसले भारतीय शैलीलाई प्रस्तुत गरेको छ भने मैले चाहिँ नेपाली फर्मुला प्रयोग गरेको छु ।
तपाईं त लभस्टोरी फिल्मका लागि चिनिनुहुन्थ्यो, राष्ट्रियतासँग कसरी जोडिनु भयो ?
खास कुरा त्यस्तो होइन् । मेरो फिल्म ‘मेरो एउटा साथी छ’ ले प्रेम, फिल्म ‘के यो माया हो’ ले कमेडी, ‘धन्दा’ ले थ्रिलर र ‘मधुमास’ ले रिभेन्ज फ्लेबर दिएको छ । त्यसकारण मैले प्रेम कथाको फिल्म बनाउने भन्ने निर्देशकको ट्याग पाएको पक्कै छैन । तर कुरा के हो भने राष्ट्रियतालाई पनि उठान गर्ने किसिमको फिल्म बनाउने इच्छा चाहिँ पूरा भएको छ ।
प्रेमकथा र राष्ट्रियताको फिल्म बनाउँदाको फरक कस्तो हुँदोरहेछ ?
लभस्टोरी फ्लेबरका फिल्म बनाउँदा त्यसको सम्बन्ध प्रेम र रोमान्ससँग जोडिएको हुन्छ । तर राष्ट्रियताको कुरा उठान भएका फिल्म चाहिँ अलिक पृथक हुँदो रहेछ । ‘चंखे शंखे पंखे’ ले राष्ट्रियतासँगै कमेडी, एक्सन र गम्भीर विषयका कुरा पनि उठाएको छ । समग्रमा भन्दा फिल्मले राष्ट्रको गम्भीर विषयलाई उठान गरेको छ ।
अब भिन्न शैलीका फिल्म बनाउने सोच हो ?
पक्कै पनि हो । किनभने नयाँ शैलीका फिल्म बनाउँदा उत्सुकता र कौतुहलता दुवै हुन्छ । त्यसकारण पनि मैले विशेष केही नयाँ गरौं भनेर अलिक भिन्न किसिमका फिल्म बनाउन थालेको हुँ ।’
महँगो फिल्म बनिएको छ, केमा यस्तो खर्च भयो ?
फिल्मलाई महँगो भनिएको छ । तर किन सिनेमा महँगो किन भनिएको हो भन्ने हामीलाई थाहा नै छैन । फिल्म बन्ने भनेको त्यसको कथा अनुसार हो । कथात्मक रूपले फिल्मलाई अगाडि बढाउँदा पक्कै पनि खर्च हुन्छ नै ।
कम बजेट र बढी बजेटको फिल्म बनाउँदाको फरकपन के रहेछ ?
मलाई लाग्छ, कम बजेटको फिल्ममा दर्शकले खोजे अनुसारको कथा हुँदैन । फिल्म भनेको मनोरञ्जनका लागि बनाइदिने कुरा हो । योसँगै व्यावसायिक मूल्यको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । फिल्मसँग हरेक कुराले भूमिका खेलेको हुन्छ । फिल्मका कलाकार छनौंट, स्थान, प्राविधिक, मेकअप, कष्ट्युमलगायत कुराहरू जोडिएका हुन्छन् । त्यसकारण अलिक बढी बजेट भएको फिल्म निर्देशन गर्दा हरेक कुराले साथ दिन्छ ।
फिल्मले लगानी उठाउँला त ?
फिल्म भनेको एउटा व्यवसाय हो । हरेक मान्छेले लगानी उठाउन वा मुनाफा कमाउनै लागि व्यवसाय गरेको हुन्छ । हामीले फिल्म पनि मेहनत गरेर बनाएका छौं । त्यसकारण लगानी उठाउँछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।
अन्य कलाकारको काम कस्तो छ ?
अन्य कलाकारहरूको काम राम्रो छ । सुवास थापा कुशल कलाकार हुन्, नयाँ अनुहारका रूपमा प्रेम पुरीले पनि राम्रो काम गरेका छन् । अभिनेत्री पूजा शर्माको अभिनय पनि तारिफ योग्य नै छ । उनीहरूबाहेक राजाराम पौडेल, प्रमोद अग्रहरि, रामशरण पाठक, नन्दिता केसीले पनि राम्रो काम गरेका छन् ।
फिल्ममा आफै निर्देश्क र हिरो हुनुहुन्छ, काम गर्न अप्ठ्यारो भएन ?
कुनै अप्ठ्यारो भएन । फिल्ममा आफूले कति निर्देशनको जिम्मा गर्ने र कति अभिनेताको जिम्मा लिने भन्ने कुरा हो । केही समय निर्देशन र केही समय अभिनयको काम गर्दा रमाइलो नै हुँदोरहेछ ।
यो फिल्मबाट दर्शकले के सन्देश पाउलान् ?
दर्शकले यो फिल्मबाट मनोरञ्जनसँगै देशका लागि युवाले के सोच्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश दिन्छ । देशमा हुने भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्थित शासन प्रणालीविरुद्ध चुप लागेर बस्नुहुँदैन भन्ने सन्देश पनि फिल्मले दिएको छ ।
प्रस्तुति : नेमिष गौतम प्रोफाईल तस्बिरमा निर्देशक सुर्दशन थापा फिल्मकी हिरोइन पूजा शर्माका साथ चंखे शंखे पंखेको प्रिमियर सोमा